तपाईलाई खाना खाने बित्तकै पेट दुख्छ भनि यसले जनाउँछ खतराको घन्टी १ मिनेट समय दिएर पढ्नुहोस ,…. – News Nepali Dainik
तपाईलाई खाना खाने बित्तकै पेट दुख्छ भनि यसले जनाउँछ खतराको घन्टी १ मिनेट समय दिएर पढ्नुहोस ,….
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २६, २०७७ समय: १९:५३:२४
क्यान्सर रअल्सर भएर पेटको आन्द्राको शल्यक्रिया गरिएको वा कुनै अंग काटिएको भएमा पेटको भाग साँघुरो भएको हुन्छ। यस्ता बिरामीको पेटमा थोरै खानेकुरा पर्दा पनि ढुस्स भएर फुल्छ र दुखाइ बढ्छ।
पेट दुख्नुको कारण कब्जियत पनि हो। अधिकांश मानिसलाई कब्जियतका कारण पेट दुखिरहेको हुन्छ। जति खाना खाए पनि दुईदेखि तीन तीन दिनसम्म दिसा हुँदैन। यसलाई ‘इरिटेबल वल सिन्ड्रोम’ भनिन्छ। पर्याप्त मात्रामा ग्यास पास नभएका कारण पेट ढाँडिरहन्छ र दुखिरहन्छ।खानाको गडबडीले हुने पेट दुखाइ
ग्यासयुक्त पेय पदार्थ (कोक, फेन्टा, पेप्सी आदि) पिउँदा पेटमा ग्यास फर्मेसन हुन्छ र पेट दुख्न थाल्छ। यस्तै बन्दा, काउली, प्याज, लसुन, केराउ आदि ग्यास फर्मेसन गर्ने खानेकुरा खाँदा पनि कसैकसैलाई पेट दुख्न सक्छ।
खाना खाँदा आरामले बिस्तारै खानुपर्छ। छिटो–छिटो वा हतारमा खाँदा पनि पेट दुख्ने समस्या आउँछ। छिटोछिटो खाना खाँदा खानासँगै हावा पनि पेटभित्र जान्छ। जसले पेटमा ग्यास भरिन्छ र पेट ढाडिएजस्तो भएर दुख्ने गर्छ।
प्रदूषित खानेकुरा खाँदा पनि पेट दुख्ने हुन्छ। यस्तै धेरै दिनको बासी खानेकुरा, बजारमा धुलो९फोहोर ठाउँमा राखिएका खानेकुरा र राम्रोसँग नपाकेको खानेकुरा खानासाथ पनि पेट दुख्ने हुन सक्छ।
Last Updated on: February 8th, 2021 at 7:58 pm